मुखभित्र यस्ता घाउँ देखिएमा सावधान ! हुनसक्छ मुखको क्यान्सर, देखिन्छन् यस्ता पाँच संकेत – Khabaarpati
November 5, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on मुखभित्र यस्ता घाउँ देखिएमा सावधान ! हुनसक्छ मुखको क्यान्सर, देखिन्छन् यस्ता पाँच संकेत
काठमाडौँ । अहिलेको व्यस्त जीवनशैली, अस्वथ्य खानपान, दाँतको सरसफाइको कमि र धूम्रपानजस्ता खराब बानीहरुले हामीलाई क्यानसर जस्तो प्राणघातक रोगको खतरा ज्यादा रहन्छ ।
अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा मुखमा आउने केहि परिवर्तनले फोक्सो तथा कोलोन क्यानसरको संकेत गर्ने बताएको छ । यस्ता क्यानसर हुनअघि देखि नै मुखमा धेरै प्रकारका परिवर्तनहरु आउने बताइएको छ । यस्ता संकेतहरुलाई समयमा पहिचान गर्नसके यसको खतराबाट जोगिने पनि अनुसन्धानले बताएका छन् ।
त्यसका लागि अनुसन्धानले पाँचवटा संकेत बताएको छ ।
-यी संकेतहरुमा मुखको छालामा लामो समयसम्म घाउ आइरहनु पनि एउटा हो । जसलाई हामी सामान्यतय भिटामिन बि कमप्लेक्सको कमी भनेर वेवास्ता गरिरहन्छौं ।-दोस्रो यदि तपाईलाई आफ्नो चिउँडो या ओठहरु घुमाउन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो पनि क्यानसरको लक्ष्यण हुनसक्छ ।
-साथै तेस्रोमा यदि लामो समयदेखि तपाईको मुखदेखि ब्लीडिङ भैरहेको छ या गालाका हड्डीहरु सुनिने गरेको छ भने त्यो पनि क्यानसरको संकेत हुनसक्छ ।
महामारीमा कसरी बढाउने प्रतिरोधात्मक क्षमता ? खानुहोस् यी खाने कुरा